Xaflad - Wikipedia
Xaflad (; ) waa dabaaldega iyo damaashaadka arin farxad leh taasi oo salka ku heeysa guul iyo gaadhista hadaf. Xafladaha noocan ah waxaa loo dhigaa arimaha muhiimka ah sida arooska, dhalashada, qalinjebinta iyo guud ahaan arimaha guusha nolosha ku salaysan. Dunida maanta waxaa ka jira nidaamyo iyo caadoyin badan kuwaasi oo ku salaysan dhaqanka, dhaqaalaha, wadanada, diinta iyo nolosha.
Aroosyada badankooda waa dhacdooyin farxad leh.
Talo Faaʼiido Leh oo Nolosha Dadka Hagaajisa
Aroosku waa xaflada loo dhigo midowga labo qof ku noqonayaan lamaane is-guursaday. Waxaa jira noocyo badan oo damaashaad iyo dabaaldeg ah oo la xidhiidha arooska. Dhaqanka Soomaalidu wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah oo loo dhigo arooska.
Guurku waa labo qof sida ninka iyo naagta marka ee is guursadaan. Waa dad kadhaxeeyo isla shaqeen, dhaqaale iyo jaceel. Soomaalida marka ee is guursanaayaan waxaa loo qabtaa buraanbur iyo cayaar. Guurka waa maalin farxad leh, qof walba neh inta oo noolyahay mar uu guursanaa, guurka sidiisa ba waa nolosha biniaadanka. Qof marku uu guursado wuu dagaa oo fakarka badan aya daaya. Gaar raga ayaa ugu fikir badan intay habluhu ka fikir yar yihin guurka soomaalida waxa kalo kamida cilmi badhis lagu sameyey hablaha ugu quruhda badan inay yihin hablaha rer mogdishu gaar ahaan gabdhaha wardhiigley waxa lasoo saray boqolkiba boqol ibtisam inanta ugu xural caysan warta nabada oo macnaheedu uu yahay dhulkii Soomaaliya.gabdhaha ugu badan ee fircoonniga loo gudo waxaa ugu badan warta nabada kuwa ugu dhaadheerna waxa ay ka soo jeedaan ssanaag sool iyo ceyn qaybo ka mid ah dunida iyo dhaqanka ah lama ogola, iyo in laga hadlin xaqiiqda.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaflad&oldid=218284"
Last edited on 6 Oktoobar 2021, at 11:27
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2021, marka ee eheed 11:27.